Prosus yakawana Stack Kufashukira kwemadhora 1.8 bhiriyoni emadhora | Linux Vakapindwa muropa
Prosus yakawana Stack Kufashukira ye $ 1.8 bhiriyoni
Mune blog blog Prosus NV, yakazivisa chiziviso chikuru chekuti vawana Stack Kufashukira nharaunda yepamhepo yevanogadzira software, mune izvo zvinoonekwa se e-commerce uye tekinoroji hombe yekutanga yakananga kutenga munzvimbo yekufunda tekinoroji. Kutenga kwakabvumiranwa pamadhora mabhiriyoni masere emadhora.
Prosus iboka repasi rese rakasarudzika muvatengi Internet. Iri boka rinotarisana nekuvaka mabhizinesi munzvimbo dzepamhepo Classifieds, kuendesa chikafu, kubhadhara uye tekinoroji yezvemari, pamwe nehunyanzvi hwekudzidzisa mumisika senge India, Russia neBrazil.
Prosus irikuisa mari zvakanyanya izvozvi e-commerce, iyo iri pakati pekutakurwa kwechikafu kusvika pakudzidziswa basa, iri kuwedzera nekuda kwechirwere chekorona. Iyo kambani zvakare ine mari yayo. Yakatengesa migove yeChinese internet hofori Tencent Holding ye $ 14.600 bhiriyoni pakutanga kwegore rino, zvakapetwa kane mari yayo.
Kutenda kune yako timu yebhizimusi, Prosus inodyara munzvimbo dzakadai sehutano, logistics, blockchain, uye zvemabhizimusi ekutengeserana. Mukutsvaga kwayo kushingaira kwemikana mitsva uye kudyidzana, kambani inodyara pasi rose mumisika ine kukura kwenguva refu.
“Nhasi tiri kufara kuzivisa kuti Stack Kufashukira kujoina Prosus, kambani yekudyara, Stack Kufashukira ichaenderera ichishanda yakazvimiririra, nechikwata chimwe chete. Usatarisira kuona shanduko huru kana 'kusangana kunonetsa,' "akadaro JOEL SPOLSKY. “Bhizinesi reStack Kufashukira richaramba rakangofanana. Bhizinesi rese rinoramba riripo: izvozvi tangova nevaridzi vakasiyana, ”akadaro. Joel Spolsky Sachigaro weBhodi reStack Kufashukira, Glitch uye HASH
Stack Kufashukira CEO Prashanth Chandrasekar akati:
“Tinofara kubatana nemhuri yeProsus, iyo inotitora isu kupinda muchikamu chitsva chekukura uye inotibvumidza kuti tiwedzere nekumhanyisa kukanganisa kweStack Kufashukira pasirese. Chiitiko chaProsus mukuvandudza kwenzvimbo nekuchengetedza, kunyanya mune yepasirese, chichaita yedu yeruzhinji chikuva kunyanyokosha mukubatsira vanogadzira uye tekinoroji kudzidza nekukura. ” "NeProsus yakanangana neramangwana repabasa, kudyidzana kuchaita kuti chigadzirwa chedu cheSawaS, Stack Kufashukira kweTimu, isvike zviuru zvemakambani pasi rese.
“Nekuramba kushomeka kwehunyanzvi uye kushanduka kwezvinodiwa zvemakambani ehunyanzvi, kudzidziswa kwehunyanzvi hwave chikamu chakakura uye chakasimba zvikuru pakudzidzisa nekusimudzira mabhizimusi. Sevashambadzi vanoshanda mune dzinopfuura nyika makumi mapfumbamwe, tinonzwisisa zvido zveava technologist nevasimudzi, kunyanya mumisika yepamusoro-yekukura. Pamusoro pekuenderera mberi nekuwedzera nharaunda yavo mumisika tinoziva zvakanaka, tinoda kubatsira zvikwata zveStack Kufashukira kukura mukati memakambani kuti vapindure mukana unoregeredzwa, ”akaenderera mberi.
Spolsky akatovimbisa nharaunda yake nekutaura pane zvinotevera:
"Stack Kufashukira ichaenderera ichishanda yakazvimiririra, pamwe chete nechikwata chimwe chete chakachiita, zvichitevera hurongwa chaihwo hwakaenzana nemaitiro ebhizinesi. Usatarisira kuona shanduko hombe kana kusagadzikana "synergies." (…) Bhizinesi rese rakamira; ikozvino tine varidzi vakasiyana « .
Enderera kutsanangura kuti uku kutenga ndicho chinhu chakanakisa chinogona kuitika kuchikuva chako. Kutanga, nekuti Stack Kufashukira kuchasara "Kuzvimirira" uye chechipiri nekuti ichave iine "Mari zhinji kusimudzira, kupa mashandiro matsva nekuvandudza zvekare".
Pfungwa yekuona yakagovaniswa naPrashanth Chandrasekar, CEO wazvino weStack Kufashukira, uyo anotsanangura mukuburitswa kwake nevatori venhau: "Zvino zvakakosha kukambani yedu zvakangofanana."
Finalmente Izvo zvinotaurwa kuti kuwanika kune iyo Stack Kufashukira webhusaiti kucharamba kuri kwemahara uye izvo zvinoramba zvisina kuchinja. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyo noti, unogona kutarisa kuziviswa kwepakutanga pane Prosus blog pa chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Prosus yakawana Stack Kufashukira ye $ 1.8 bhiriyoni
Librem yatotanga kutumira nhare dzayo dzakagadzirwa muUnited States